UHulumeni kanye nezinhlangano zamatekisi lufanele bazibophezele kwi-National Safe Taxis Charter, baphinde basebenzisane nathi ekuqaliseni imigomo kanye nezinqubo ezisifinyelelisa ekuphepheni kwabesifazane uma besebenzisa amatekisi. U-2017 ngunyaka wokuhlanga kwabesifazane baseMzansi benze amatekisi aphephe. Hlanganyela nathi.
I-Soul City kanye nezinye izinhlangano zabesifazane isebenza kanzima ekuhlahleni i-Safe Taxis Charter. Ngokufaka igama lakho kulo mkhankaso, singafaka ingcindezi njengomphakathi kuhulumeni kanye nezinhlangano zamatekisi ukuthi bathathe izinyathelo ezinqatha.Ungakwazi futhi ukuthi ufake umbono wakho kwi-Safe Taxi Charter ngemuva kokuthi ufake igama lakho.
Ngokwemibono yamanye amalunga omphakathi, ngezansi kunokusalungiswa mayelana ne-Safe Taxis Now Charter:
- Amarenke azoba yizindawo ezinokukhanya.
- Izibhamu azingavunyelwa ematekisini.
- Abashayeli bamatekisi bazoba nezigqebhezana ezibhalwe amagama abo ngokusobala.
- Abashayeli bamatekisi kuzofanele bavunywe ngamaphoyisa, phecelezi i-clearance, ukuthi abanamacala okudlwengula noma ukuhlukumeza ngokocansi.
- Amatekisi kuzofanele abenemibala ngokoseseshini angaphansi kwabo.
- Amarenke amatekisi aziwa ngokuthi angezinye yezindawo ezinokudlwengula, ukuhlukumeza ngokocansi kanye nangobulili, futhi ngenxa yalokhu kufanele kube khona amaphoyisa ahlolayo emarenke..
- Zonke izifunda kufanele zibe nenombolo yosizi, i-SOS, abagibeli abangashayela kuyo.
- Wonke amatekisi kuzofuneka abenayo lenombolo inanyathiselwe lapho abagibeli bengayibona.
Sayinda umkhankaso ofuna amatekisi aphephile manje!
Sesanele ukuhlukunyezwa, ukuthunjwa, ukudlwengulwa kanye nokubulawa. Tshela uhulumeni kanye nezinhlangano zamatekisi ukuthi bazibophezele kwi-Safe Taxis Charter manje!